SORRY – ဆောရီး ..ဆိုတဲ့ စာတစ်လုံးရဲ့ နောင်တ – MYITMYAT
HomeဆေးမြီတိုSORRY – ဆောရီး ..ဆိုတဲ့ စာတစ်လုံးရဲ့ နောင်တ
ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးက ငယ်ငယ်လေးတည်းက အတူကြီးပြင်းလာကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို အမြဲအဖော်ခေါ်ပြီး ရွာပြင်ဖက်ကချောင်းစပ်မှာ ငါးသွားဖမ်းလေ့ရှိတယ်။
ငါးဖမ်းပြန်တိုင်း ကောင်လေးရဲ့ပလိုင်းထဲမှာ ငါးတွေကအပြည့်… ကောင်မလေးမှာတော့ လက်ဗလာနဲ့ ပြန်ခဲ့ရတာချည်းပဲ။ငါးမရခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးက မျက်ရည်အဝဲသားနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ မပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူး။
ညစာစားခါနီး အိမ်ရှေ့တံခါးခေါက်သံကြားတော့ ကောင်မလေးက တံခါးဖွင့်ကြည့်တယ်။
တံခါးရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ ကောင်လေးကိုတွေ့တော့ နှုတ်ခမ်းစူပြီး လှည့်ထွက်မယ်လုပ်တော့ကောင်လေးက ကပျာကယာရှေ့တက်ပြီး “နင့်ငါးတွေ ငါဖမ်းပစ်လိုက်တာ ဆောရီးနော်. ရော့ ဒါနင့်အတွက်”လို့တောင်းပန်ပြီး ငါးတွေထည့်ထားတဲ့ ဖန်ငါးကန်လေးကို ကောင်မလေးဆီလှမ်းပေးတယ်။
စူနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးပြေလျော့သွားပြီး အပြုံးပန်းတစ်ပွင့် ဖူးပွင့်လာတယ်။
ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ ကလေးဘဝကို အဲဒီလို အပြစ်ကင်းကင်း သူတို့ဖြတ်သန်းရင်း တဖြေးဖြေး ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတယ်။
★ အဲဒီ “ဆောရီး” က ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ဆောရီးဖြစ်ပါတယ်။ ★
ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို အမြဲစနောက်တတ်တယ်။
ကောင်မလေးငိုတဲ့အထိ သူအစသန်ခဲ့သလို ကောင်မလေးရယ်တဲ့အထိ သူချော့တတ်ခဲ့တယ်။
ကောင်လေးက ကောင်မလေးရဲ့စက်ဘီးကို အမြဲလေခိုးလျှော့ပြီး တစ်နေရာမှာပုန်းနေတတ်တယ်။
ခြေမကိုင်မီ၊ လက်မကိုင်မီဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို ချောင်းကြည့်ရင်း သူ့ဆီဆက်လာမယ့် ကောင်မလေးရဲ့ဖုန်းကို သူစောင့်နေတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးဆီက လေခိုးလျှော့တဲ့သူခိုးကိုဆူပူကြိမ်းမောင်းသံတွေ နားထောင်ပြီး သူသဘောကျနေတတ်တယ်။
ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကောင်မလေးရဲ့ အဲဒီလိုအပြုအမူကို သူအရမ်းနှစ်ခြိုက်ခဲ့တယ်။
ချောင်းကြည့်ရာကနေ ကောင်လေးထွက်လာပြီး အဝေးကနေ အခုမှရောက်လာဟန်နဲ့လေမရှိတဲ့စက်ဘီးကို ကူတွန်းပေးတတ်တယ်။ ဘေးက ပွစိပွစိရေရွတ်နေတဲ့ ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးသူ ခိုးရယ်တတ်တယ်။ ပြီးမှ စိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ “ဆောရီး…. ငါမှားသွားတယ်”လို့ တောင်းပန်တတ်တယ်။
ကျိန်ဆဲနေတဲ့ ကောင်မလေးနှုတ်ခမ်းတွေ ပျော့ပျောင်းသွားပြီ နောက်တစ်ကြိမ်ဒီလိုမလုပ်ဖို့ကောင်လေးကို ဆုံးမတတ်တယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ အဆုံးအမအောက်မှာ ကောင်လေးက ခေါင်းငုံ့လို့နေ့ရက်တွေကို ရယ်မောခြင်းနဲ့ သူတို့အဆုံးသတ်ခဲ့ကြတယ်။
★ အဲဒီ “ဆောရီး” က ပျော်ရွှင်တဲ့ဆောရီးဖြစ်ပါတယ်။ ★
ကောင်လေးကအလုပ်များပြီး နားရက်တွေ သိပ်မရှိခဲ့ဘူး။ ကောင်မလေးက သူ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီးကောင်လေးကို အပြစ်တင်တယ်။ နောက်တော့ ပထမဆုံးအကြိမ် သူတို့ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
ကောင်မလေးငိုတော့ ကောင်လေးက “ဒါ ငါ့အလုပ်အတွက်” လို့ ဖြေရှင်းတယ်။
နောက်တော့လည်း ကောင်မလေးက မနေနိုင်ပါဘူး။
ကောင်လေးကို ပြန်ခေါ်ပြီး စစ်ပြေငြိမ်းကြောင်း လက်နက်ချတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့မကြာခဏ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ခေါ်လိုက် လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ရန်ဖြစ်တိုင်းလည်း ကောင်မလေးဘက်ကစပြီး ပြေငြိမ်းတာချည်းပဲ။
အဲဒီနှစ်က ကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့မှာ ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် မွေးနေ့ပွဲလုပ်ပေးမယ်လို့ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ကတိပေးတယ်။ မွေးနေ့မှာ ကောင်လေးအလာကိုကောင်မလေးစောင့်နေခဲ့တယ်။ ညဥ့်နက်သန်းခေါင်အထိ၊ မိုးလင်းတဲ့အထိ စောင့်နေခဲ့တယ်။
မနက်နိုးလာတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ပါးပြင်ပေါ်မှာ မျက်ရည်စီးကြောင်းရာတွေ စွန်းထင်းလို့….
ကောင်လေးရောက်လာတော့ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေးရင်း“ဆောရီးနော်… နင့်ကို ငါလက်ထပ်ပါရစေ” ဆိုပြီး လက်စွပ်တစ်ကွင်းထုတ်ပေးတယ်။
★ အဲဒီ “ဆောရီး” က တစ်ဘဝစာကို တာဝန်ယူရဲတဲ့ဆောရီးဖြစ်ပါတယ်။ ★
မင်္ဂလာဆောင် အတူနေပြီးတဲ့နောက် ကောင်လေးရဲ့အလုပ်အကိုင်တွေ ပိုတိုးတက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။
ကောင်မလေးက ကောင်လေးအတွက် နေ့တိုင်းချက်ပြုတ်၊ လျှော်ဖွပ်နဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကောင်မလေးက ဈေးသွားတိုင်း ငါးလေးတွေဝယ်လာပြီး ကန်လေးထဲမှာ မွေးထားတတ်တယ်။
“ဘာကြောင့်လဲ” လို့ ကောင်လေးမေးခဲ့ရင် ဘာမှပြန်မဖြေဘဲ သူပြုံးနေခဲ့တတ်တယ်။
ပြန်လာတိုင်းလည်း ရေမွှေးနံ့တစ်မျိုးမျိုးက ကောင်လေးကိုယ်မှာ ကပ်ငြိလာတတ်တယ်။
ဒါကို ကောင်မလေးမမေးခင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ကောင်လေးဖြေရှင်းတတ်တယ်။
ဘယ်မှလည်း သိပ်မသွားတော့ဘဲ မရွှင်မပျနဲ့ အိမ်ထဲမှာပဲ အောင်းနေခဲ့တော့တယ်။
ခံစားချက်များတဲ့ ကိုရီးယားကားတွေကြည့်ပြီး ကောင်မလေးငိုနေတတ်တယ်။
နောက်ပိုင်း ကောင်လေးနောက်ကျပြန်လာတိုင်း သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ရေမွှေးနံ့တစ်မျိုးပဲ ရတတ်တော့တယ်။
ကောင်မလေးဘာမှ မမေးခဲ့ပါဘူး။ ဒါကိုကောင်လေးက မလုံသလိုနဲ့“ဆောရီး…ဒီနေ့ အလုပ်မှာ စားပွဲသောက်ပွဲရှိပြန်တယ်” လို့ ပြောတတ်တယ်။
★ အဲဒီ “ဆောရီး” က လိမ်ညာခြင်းအစရဲ့ဆောရီးဖြစ်ပါတယ်။ ★
အလုပ်အကိုင်ကောင်းလေ၊ ဘေးက မြှောက်ပင့်တဲ့လူများလေနဲ့ ကောင်လေးရဲ့နေ့ရက်တွေက မြှောက်ပင့်သံတွေကြားထဲမှာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။
ကောင်မလေးကတော့ အိမ်ထဲအိမ်ပြင်တောင် အထွက်နည်းခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အိမ်ထဲမှာ ပိတ်လှောင်ပြီးနေခဲ့တယ်။
အရင်တုန်းက ကောင်လေးနဲ့ပြောမကုန်နိုင်တဲ့ တီတီတာတာစကားလေးတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့်အခုချိန်မှာတော့ ကောင်မလေးက တစ်ယောက်တည်းအဖော်မဲ့လို့ အထီးကျန်နေခဲ့ရတယ်။
ကောင်လေးကို “ဘယ်အချိန် ပြန်လာမလဲ?” လို့မေးတိုင်း ကောင်လေးကအစာနင်သွားတဲ့အသံနဲ့ “ဆောရီး… ငါအလုပ်များနေတယ်” လို့ ပြန်ဖြေတတ်တယ်။
ဖုန်းခွက်ကို မသာမယာချရင်း ကောင်မလေး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကောင်လေးဘယ်အချိန် အိမ်ပြန်လာမလဲဆိုတာကို သူမမေးခဲ့တော့ဘူး။
★ အဲဒီ “ဆောရီး”က ဝတ်ကျေတမ်းကျေပြောတဲ့ ဆောရီးဖြစ်ပါတယ်။ ★
ကောင်လေးအိမ်မပြန်တာဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အိုစာသွားတဲ့ သူ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီအလှတွေသူစပြင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်မှရနိုင်မယ်၊တွန့်ဆုတ်နေလို့မဖြစ်မှန်း သူသိလိုက်တယ်။
အဲဒီနေ့က ကောင်မလေးအလှတွေပြင်ပြီး ကောင်လေးဆီကို သွားခဲ့တယ်။
ဒါဟာ ကောင်လေးရဲ့အလုပ်ဆီ ပထမဆုံးအကြိမ် သူသွားခဲ့တာဖြစ်သလိုနောက်ဆုံးအကြိမ်လည်းဟုတ်ခဲ့တယ်။ ဓာတ်လှေကားခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကောင်လေးအမြဲပြောတဲ့ “အလုပ်များတယ်” ဆိုတဲ့နေရာကို သူရောက်လာခဲ့တယ်။
ခမ်းခမ်းနားနားပြင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီထောင့်တိုင်းကို သူလိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်။
နေရာတိုင်းက လှပလို့နေတယ်။ ဝရန်တာကိုဖြတ်ပြီး ကောင်လေးရဲ့ရုံးခန်းဆီ သူရောက်လာခဲ့တယ်။
ရုံးခန်းတံခါးကို သူသာသာလေး တွန်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ တခဏ သူအံ့သြမင်သက်သွားမိတယ်။
သူ့မျက်စိရှေ့မှာ တွေ့ရတဲ့သူက သူ့ခင်ပွန်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး…
သူ့စက်ဘီးကို လေအမြဲခိုးလျော့တဲ့ နောက်တောက်တောက်ကောင်လေး မဟုတ်ခဲ့ဘူး…
ငါးတွေဖမ်းပြီး ကန်ထဲထည့်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးလည်း မဟုတ်ခဲ့ဘူး….
တခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ အကြည်ဆိုက်နေတဲ့ ယောက်ျား၊သွေးသားတွေ ဆာလောင်နေတဲ့ အရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ကောင်မလေးကိုတွေ့တော့ ကောင်လေးက ကပျာကယာ ဖြေရှင်းဖို့လုပ်တယ်။
နေရာကနေ ကောင်မလေး ချက်ချင်းလှည့်ထွက်တော့ နောက်ကနေ ကောင်လေးအပြေးလိုက်တယ်။
အဲဒီညက မိုးတွေသည်းသည်းမည်းမည်း ရွာလို့………
ကောင်လေးရဲ့အော်သံတွေကို ကောင်မလေး ဂရုမစိုက်ခဲ့တော့ဘူး။
“ဆောရီးပဲ…. နင့်ကိုပဲ ငါချစ်ပါတယ်ကွာ… နင့်ကိုပဲ ငါတကယ်ချစ်တာပါ” တဲ့။
★ အဲဒီ “ဆောရီး” က လူကိုထိခိုက်နာကျင်စေတဲ့ဆောရီး ဖြစ်ပါတယ်။ ★
ကောင်မလေးပျောက်နေခဲ့တယ်။ ကောင်မလေးမရှိတော့ကောင်လေးရဲ့ကမ္ဘာက မှောင်မည်းလို့… အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်လဲ မရှိတော့ဘူး။
နေ့ရက်တွေကို အရက်နဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ ကောင်မလေးကို လိုက်ရှာချင်ပေမယ့်သူငယ်ချင်းမရှိတဲ့ ကောင်မလေးကို ဘယ်သွားရှာရမှန်း မသိခဲ့ဘူး။
ကောင်မလေးရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသူငယ်ချင်းက သူပဲရှိခဲ့တာမို့ ဖုန်းအလာကို စောင့်နေဖို့ပဲကောင်လေးတတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ ဖုန်းတွေလွတ်သွားမှာစိုးလို့ ဖုန်းကို(၂၄)နာရီလုံး ဖွင့်ပြီး သူစောင့်နေခဲ့တယ်။
ကောင်လေးရဲ့ ဒီလိုစောင့်မျှော်ခြင်းက နှစ်ဝက်အထိကြာသွားခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာ စာတိုက်ကနေ ဗူးလေးတစ်လုံး ရောက်လာခဲ့တယ်။
ဗူးထဲမှာ ချောင်းငါးလေးတွေရဲ့ နမူနာရုပ်ကြွလေးတွေပါတယ်။
ငါးတချို့က သစ်ရွက်လေးဘေးမှာ၊ တချို့က မြက်တွေကြားထဲမှာ ပုံစံအမျိုးအမျိုးနဲ့ ရှိနေခဲ့တယ်။
ဗူးထဲမှာ စာတစ်စောင်လည်းပါပြီး စာထဲမှာ ဒီလိုရေးထားပါတယ်။
“နင့်ကိုတွေ့ဖို့ ငါ့မှာ သတ္တိမရှိခဲ့ဘူး။
ငါပျော့ညံ့လွန်းလို့ဖြစ်မယ် ဒါမှမဟုတ် နင့်ကိုငါ လုံးဝမတွေ့ချင်လို့လည်းဖြစ်မယ်။
ငါ နေကောင်းတယ်။ နင့်ကိုခွဲပြီး ဘယ်လိုရှင်သန်ရမယ်ဆိုတာကို ငါသိခဲ့တယ်။
ငါ့ကိုယ်ငါ ဂရုစိုက်ကျွေးမွေးနိုင်ခဲ့တယ်။ နင့်အပြန်ကို ငါနေ့တိုင်း စောင့်စရာမလိုတော့ဘူး။
ဟင်းတွေ ပူပူနွေးနွေးချက်ပြီး အေးစက်သွားတဲ့အထိ ငါစောင့်စရာ မလိုခဲ့တော့ဘူး။
ဖုန်းလည်း ငါမသုံးတော့ဘူး။ နင့်အတွက်နဲ့ (၂၄)နာရီလုံးဖုန်းကို ငါဖွင့်ထားစရာလည်း မလိုတော့ဘူး။
လှပတဲ့နေ့ရက်တွေကို ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတာကို ငါသိသွားပြီ။
နင့်ကို ဘယ်လိုချစ်ရမယ်ဆိုတာကို ငါမေ့လိုက်နိုင်ခဲ့ပြီ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါ့အချစ်တွေကို အနာတရဖြစ်အောင် နင်ဆော့ကစားခဲ့လို့ပါပဲ။
ကွာရှင်းစာချုပ်ကို ငါးကန်အောက်မှာ ငါဖိထားခဲ့တယ်။ နင်လက်မှတ်ထိုးပြီးရင်ဒီလိပ်စာအတိုင်း ငါ့ကိုပို့ပေးခဲ့ပါ။
★ ဆောရီးပဲ…. ငါစိတ်တွေ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သွားခဲ့ပါပြီ” ★
လိပ်စာအတိုင်း ကောင်မလေးကို ကောင်လေးသွားရှာခဲ့တယ်။
ရင်ထဲမှာ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ ကောင်မလေးဆီက ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေယူပြီးကောင်မလေးမရှိရင် သူ့ဘဝ မရှင်သန်ရဲတဲ့အကြောင်းပြောဖို့ ကောင်လေးလိုက်သွားခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် အိမ်တံခါးဖွင့်ပေးတဲ့သူက ကောင်မလေးကိုယ်တိုင် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။
ကောင်လေးဆီက စာရေးပြီးတဲ့နောက် သူ့ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်သွားပါတယ်လို့ကောင်မလေးအဖေက စိတ်မကောင်းစွာပြောတယ်။
နောင်တတွေက တပွေ့တပိုက်နဲ့ သူ့တစ်သက်စာတောင် ထမ်းပိုးလို့ မနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
★ တချို့ “ဆောရီး” က အဲဒီလိုနည်းနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြတယ်။ ★
ဘဝတစ်လျှောက်မှာ ကိုယ့်ကို တစ်သက်တာတန်ဖိုးထားမြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ကိုတော့ လူတိုင်းကြုံကြရမှာပဲ။
အဲဒီလို ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားသူကို မြတ်နိုးတတ်ပါစေ။
“ဆောရီး”ဆိုတဲ့ တောင်းပန်မှုတိုင်းက“ကိစ္စမရှိပါဘူး”ဆိုတဲ့စကားနဲ့ လဲလှယ်လို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို မမြင်နိုင်တဲ့ အနာတရနဲ့ဒဏ်ရာတွေ မပေးမိပါစေနဲ့။
ဒါဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကို ထိခိုက်နာကျင်စေပါတယ်။
“အချစ်”ဆိုတာကို ခံစားစေပြီး “ဆောရီး”ကို အလွယ်တကူ မပြောမိဖို့ သူတို့နားလည်တတ်ပါစေ….။
မန္တလေးစာကြည့်တိုက် ဇော်ဇော် ၀၉၂၅၆၁၁၆၇၂၇- စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ကောငျလေးနဲ့ကောငျမလေးက ငယျငယျလေးတညျးက အတူကွီးပွငျးလာကွသူတှဖွေဈတယျ။
ကောငျလေးက ကောငျမလေးကို အမွဲအဖျောချေါပွီး ရှာပွငျဖကျကခြောငျးစပျမှာ ငါးသှားဖမျးလရှေိ့တယျ။
ငါးဖမျးပွနျတိုငျး ကောငျလေးရဲ့ပလိုငျးထဲမှာ ငါးတှကေအပွညျ့… ကောငျမလေးမှာတော့ လကျဗလာနဲ့ ပွနျခဲ့ရတာခညျြးပဲ။ငါးမရခဲ့တဲ့ ကောငျမလေးက မကျြရညျအဝဲသားနဲ့ အိမျပွနျရောကျတဲ့အထိ မပြျောရှငျခဲ့ဘူး။
ညစာစားခါနီး အိမျရှတေံ့ခါးခေါကျသံကွားတော့ ကောငျမလေးက တံခါးဖှငျ့ကွညျ့တယျ။
တံခါးရှမှေ့ာရပျနတေဲ့ ကောငျလေးကိုတှတေ့ော့ နှုတျခမျးစူပွီး လှညျ့ထှကျမယျလုပျတော့ကောငျလေးက ကပြာကယာရှတေ့ကျပွီး “နငျ့ငါးတှေ ငါဖမျးပဈလိုကျတာ ဆောရီးနျော. ရော့ ဒါနငျ့အတှကျ”လို့တောငျးပနျပွီး ငါးတှထေညျ့ထားတဲ့ ဖနျငါးကနျလေးကို ကောငျမလေးဆီလှမျးပေးတယျ။
စူနတေဲ့ကောငျမလေးရဲ့ နှုတျခမျးလေးပွလြေော့သှားပွီး အပွုံးပနျးတဈပှငျ့ ဖူးပှငျ့လာတယျ။
ရိုးသားဖွူစငျတဲ့ ကလေးဘဝကို အဲဒီလို အပွဈကငျးကငျး သူတို့ဖွတျသနျးရငျး တဖွေးဖွေး ကွီးပွငျးလာခဲ့ကွတယျ။
★ အဲဒီ “ဆောရီး” က ရိုးသားဖွူစငျတဲ့ဆောရီးဖွဈပါတယျ။ ★
ကောငျလေးက ကောငျမလေးကို အမွဲစနောကျတတျတယျ။
ကောငျမလေးငိုတဲ့အထိ သူအစသနျခဲ့သလို ကောငျမလေးရယျတဲ့အထိ သူခြော့တတျခဲ့တယျ။
ကောငျလေးက ကောငျမလေးရဲ့စကျဘီးကို အမွဲလခေိုးလြှော့ပွီး တဈနရောမှာပုနျးနတေတျတယျ။
ခွမေကိုငျမီ၊ လကျမကိုငျမီဖွဈနတေဲ့ ကောငျမလေးကို ခြောငျးကွညျ့ရငျး သူ့ဆီဆကျလာမယျ့ ကောငျမလေးရဲ့ဖုနျးကို သူစောငျ့နတေတျတယျ။ ပွီးတော့ ကောငျမလေးဆီက လခေိုးလြှော့တဲ့သူခိုးကိုဆူပူကွိမျးမောငျးသံတှေ နားထောငျပွီး သူသဘောကနြတေတျတယျ။
ဘာကွောငျ့မှနျးမသိ ကောငျမလေးရဲ့ အဲဒီလိုအပွုအမူကို သူအရမျးနှဈခွိုကျခဲ့တယျ။
ခြောငျးကွညျ့ရာကနေ ကောငျလေးထှကျလာပွီး အဝေးကနေ အခုမှရောကျလာဟနျနဲ့လမေရှိတဲ့စကျဘီးကို ကူတှနျးပေးတတျတယျ။ ဘေးက ပှစိပှစိရရှေတျနတေဲ့ ကောငျမလေးကိုကွညျ့ပွီးသူ ခိုးရယျတတျတယျ။ ပွီးမှ စိတျမကောငျးဟနျနဲ့ “ဆောရီး…. ငါမှားသှားတယျ”လို့ တောငျးပနျတတျတယျ။
ကြိနျဆဲနတေဲ့ ကောငျမလေးနှုတျခမျးတှေ ပြော့ပြောငျးသှားပွီ နောကျတဈကွိမျဒီလိုမလုပျဖို့ကောငျလေးကို ဆုံးမတတျတယျ။ ကောငျမလေးရဲ့ အဆုံးအမအောကျမှာ ကောငျလေးက ခေါငျးငုံ့လို့နရေ့ကျတှကေို ရယျမောခွငျးနဲ့ သူတို့အဆုံးသတျခဲ့ကွတယျ။
★ အဲဒီ “ဆောရီး” က ပြျောရှငျတဲ့ဆောရီးဖွဈပါတယျ။ ★
ဒီလိုနဲ့ ကြောငျးပွီးတော့ ကောငျလေးနဲ့ကောငျမလေး ကိုယျစီအလုပျဝငျကွတယျ။
ကောငျလေးကအလုပျမြားပွီး နားရကျတှေ သိပျမရှိခဲ့ဘူး။ ကောငျမလေးက သူ့ကိုဂရုမစိုကျဘူးဆိုပွီးကောငျလေးကို အပွဈတငျတယျ။ နောကျတော့ ပထမဆုံးအကွိမျ သူတို့ရနျဖွဈခဲ့ကွတယျ။
ကောငျမလေးငိုတော့ ကောငျလေးက “ဒါ ငါ့အလုပျအတှကျ” လို့ ဖွရှေငျးတယျ။
နောကျတော့လညျး ကောငျမလေးက မနနေိုငျပါဘူး။
ကောငျလေးကို ပွနျချေါပွီး စဈပွငွေိမျးကွောငျး လကျနကျခတြယျ။
နောကျပိုငျးမှာ သူတို့မကွာခဏ ရနျဖွဈလိုကျ ပွနျချေါလိုကျ လုပျခဲ့ကွတယျ။
ရနျဖွဈတိုငျးလညျး ကောငျမလေးဘကျကစပွီး ပွငွေိမျးတာခညျြးပဲ။
အဲဒီနှဈက ကောငျမလေးရဲ့မှေးနမှေ့ာ ရိုမနျတဈဆနျဆနျ မှေးနပှေဲ့လုပျပေးမယျလို့ကောငျလေးက ကောငျမလေးကို ကတိပေးတယျ။ မှေးနမှေ့ာ ကောငျလေးအလာကိုကောငျမလေးစောငျ့နခေဲ့တယျ။ ညဥျ့နကျသနျးခေါငျအထိ၊ မိုးလငျးတဲ့အထိ စောငျ့နခေဲ့တယျ။
မနကျနိုးလာတဲ့ ကောငျမလေးရဲ့ပါးပွငျပျေါမှာ မကျြရညျစီးကွောငျးရာတှေ စှနျးထငျးလို့….
ကောငျလေးရောကျလာတော့ ကောငျမလေးရဲ့ မကျြရညျတှကေို သုတျပေးရငျး“ဆောရီးနျော… နငျ့ကို ငါလကျထပျပါရစေ” ဆိုပွီး လကျစှပျတဈကှငျးထုတျပေးတယျ။
★ အဲဒီ “ဆောရီး” က တဈဘဝစာကို တာဝနျယူရဲတဲ့ဆောရီးဖွဈပါတယျ။ ★
မင်ျဂလာဆောငျ အတူနပွေီးတဲ့နောကျ ကောငျလေးရဲ့အလုပျအကိုငျတှေ ပိုတိုးတကျအောငျမွငျခဲ့တယျ။
ကောငျမလေးက ကောငျလေးအတှကျ နတေို့ငျးခကျြပွုတျ၊ လြှျောဖှပျနဲ့ ကြှမျးကငျြတဲ့ အိမျထောငျရှငျမတဈဦးဖွဈခဲ့တယျ။
ကောငျမလေးက စြေးသှားတိုငျး ငါးလေးတှဝေယျလာပွီး ကနျလေးထဲမှာ မှေးထားတတျတယျ။
“ဘာကွောငျ့လဲ” လို့ ကောငျလေးမေးခဲ့ရငျ ဘာမှပွနျမဖွဘေဲ သူပွုံးနခေဲ့တတျတယျ။
ပွနျလာတိုငျးလညျး ရမှေေးနံ့တဈမြိုးမြိုးက ကောငျလေးကိုယျမှာ ကပျငွိလာတတျတယျ။
ဒါကို ကောငျမလေးမမေးခငျ အကွောငျးအမြိုးမြိုးပွပွီး ကောငျလေးဖွရှေငျးတတျတယျ။
အဲဒီကစ ကောငျမလေး စကားသိပျမပွောတော့ဘူး။ အရငျကလိုလညျး မသှကျလကျတော့ဘူး။
ဘယျမှလညျး သိပျမသှားတော့ဘဲ မရှငျမပနြဲ့ အိမျထဲမှာပဲ အောငျးနခေဲ့တော့တယျ။
ခံစားခကျြမြားတဲ့ ကိုရီးယားကားတှကွေညျ့ပွီး ကောငျမလေးငိုနတေတျတယျ။
နောကျပိုငျး ကောငျလေးနောကျကပြွနျလာတိုငျး သူ့ကိုယျပျေါမှာ ရမှေေးနံ့တဈမြိုးပဲ ရတတျတော့တယျ။
ကောငျမလေးဘာမှ မမေးခဲ့ပါဘူး။ ဒါကိုကောငျလေးက မလုံသလိုနဲ့“ဆောရီး…ဒီနေ့ အလုပျမှာ စားပှဲသောကျပှဲရှိပွနျတယျ” လို့ ပွောတတျတယျ။
★ အဲဒီ “ဆောရီး” က လိမျညာခွငျးအစရဲ့ဆောရီးဖွဈပါတယျ။ ★
တဖွေးဖွေး အလုပျအကွောငျးပွပွီး ကောငျလေး အိမျမပွနျလာခဲ့တော့ဘူး။
အလုပျအကိုငျကောငျးလေ၊ ဘေးက မွှောကျပငျ့တဲ့လူမြားလနေဲ့ ကောငျလေးရဲ့နရေ့ကျတှကေ မွှောကျပငျ့သံတှကွေားထဲမှာ ဂုဏျယူဝငျ့ကွှားစှာနဲ့ ကုနျဆုံးခဲ့တယျ။
ကောငျမလေးကတော့ အိမျထဲအိမျပွငျတောငျ အထှကျနညျးခဲ့တယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကို အိမျထဲမှာ ပိတျလှောငျပွီးနခေဲ့တယျ။
အရငျတုနျးက ကောငျလေးနဲ့ပွောမကုနျနိုငျတဲ့ တီတီတာတာစကားလေးတှေ ရှိခဲ့ပမေယျ့အခုခြိနျမှာတော့ ကောငျမလေးက တဈယောကျတညျးအဖျောမဲ့လို့ အထီးကနျြနခေဲ့ရတယျ။
ကောငျလေးကို “ဘယျအခြိနျ ပွနျလာမလဲ?” လို့မေးတိုငျး ကောငျလေးကအစာနငျသှားတဲ့အသံနဲ့ “ဆောရီး… ငါအလုပျမြားနတေယျ” လို့ ပွနျဖွတေတျတယျ။
ဖုနျးခှကျကို မသာမယာခရြငျး ကောငျမလေး စိတျမကောငျးဖွဈခဲ့တယျ။
အဲဒီနောကျမှာတော့ ကောငျလေးဘယျအခြိနျ အိမျပွနျလာမလဲဆိုတာကို သူမမေးခဲ့တော့ဘူး။
★ အဲဒီ “ဆောရီး”က ဝတျကတြေမျးကပြွေောတဲ့ ဆောရီးဖွဈပါတယျ။ ★
ရုပျရှငျတှထေဲကလိုမြိုး ကောငျမလေးက သူ့ကိုယျသူ အလှစပွငျခဲ့တယျ။
ကောငျလေးအိမျမပွနျတာဟာ တဈနတေ့ဈနေ့ အိုစာသှားတဲ့ သူ့ရုပျရညျကွောငျ့ဖွဈမယျဆိုပွီအလှတှသေူစပွငျခဲ့တယျ။ ကိုယျရဲ့ပြျောရှငျခွငျးကို ကိုယျကိုယျတိုငျ လုပျဆောငျမှရနိုငျမယျ၊တှနျ့ဆုတျနလေို့မဖွဈမှနျး သူသိလိုကျတယျ။
အဲဒီနကေ့ ကောငျမလေးအလှတှပွေငျပွီး ကောငျလေးဆီကို သှားခဲ့တယျ။
ဒါဟာ ကောငျလေးရဲ့အလုပျဆီ ပထမဆုံးအကွိမျ သူသှားခဲ့တာဖွဈသလိုနောကျဆုံးအကွိမျလညျးဟုတျခဲ့တယျ။ ဓာတျလှကေားခလုတျကိုနှိပျပွီးကောငျလေးအမွဲပွောတဲ့ “အလုပျမြားတယျ” ဆိုတဲ့နရောကို သူရောကျလာခဲ့တယျ။
ခမျးခမျးနားနားပွငျထားတဲ့ ကုမ်ပဏီထောငျ့တိုငျးကို သူလိုကျကွညျ့ခဲ့တယျ။
နရောတိုငျးက လှပလို့နတေယျ။ ဝရနျတာကိုဖွတျပွီး ကောငျလေးရဲ့ရုံးခနျးဆီ သူရောကျလာခဲ့တယျ။
ရုံးခနျးတံခါးကို သူသာသာလေး တှနျးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတဲ့ တခဏ သူအံ့သွမငျသကျသှားမိတယျ။
သူ့မကျြစိရှမှေ့ာ တှရေ့တဲ့သူက သူ့ခငျပှနျးမဟုတျခဲ့ဘူး…
သူ့စကျဘီးကို လအေမွဲခိုးလြော့တဲ့ နောကျတောကျတောကျကောငျလေး မဟုတျခဲ့ဘူး…
ငါးတှဖေမျးပွီး ကနျထဲထညျ့ခဲ့တဲ့ ကောငျလေးလညျး မဟုတျခဲ့ဘူး….
တခွားမိနျးမတဈယောကျနဲ့ အကွညျဆိုကျနတေဲ့ ယောကျြား၊သှေးသားတှေ ဆာလောငျနတေဲ့ အရိုငျးတိရစ်ဆာနျဖွဈနခေဲ့တယျ။
ကောငျမလေးကိုတှတေ့ော့ ကောငျလေးက ကပြာကယာ ဖွရှေငျးဖို့လုပျတယျ။
နရောကနေ ကောငျမလေး ခကျြခငျြးလှညျ့ထှကျတော့ နောကျကနေ ကောငျလေးအပွေးလိုကျတယျ။
အဲဒီညက မိုးတှသေညျးသညျးမညျးမညျး ရှာလို့………
ကောငျလေးရဲ့အျောသံတှကေို ကောငျမလေး ဂရုမစိုကျခဲ့တော့ဘူး။
“ဆောရီးပဲ…. နငျ့ကိုပဲ ငါခဈြပါတယျကှာ… နငျ့ကိုပဲ ငါတကယျခဈြတာပါ” တဲ့။
ကောငျလေးရဲ့အျောသံတှေ မိုးသံနဲ့အတူ ရောထှေးလို့ ကောငျမလေးမကွားခဲ့ပါဘူး။
★ အဲဒီ “ဆောရီး” က လူကိုထိခိုကျနာကငျြစတေဲ့ဆောရီး ဖွဈပါတယျ။ ★
ကောငျမလေးပြောကျနခေဲ့တယျ။ ကောငျမလေးမရှိတော့ကောငျလေးရဲ့ကမ်ဘာက မှောငျမညျးလို့… အလုပျလုပျခငျြစိတျလဲ မရှိတော့ဘူး။
နရေ့ကျတှကေို အရကျနဲ့ဖွတျသနျးခဲ့တယျ။ ကောငျမလေးကို လိုကျရှာခငျြပမေယျ့သူငယျခငျြးမရှိတဲ့ ကောငျမလေးကို ဘယျသှားရှာရမှနျး မသိခဲ့ဘူး။
ကောငျမလေးရဲ့တဈဦးတညျးသောသူငယျခငျြးက သူပဲရှိခဲ့တာမို့ ဖုနျးအလာကို စောငျ့နဖေို့ပဲကောငျလေးတတျနိုငျခဲ့တယျ။ ကောငျမလေးရဲ့ ဖုနျးတှလှေတျသှားမှာစိုးလို့ ဖုနျးကို(၂၄)နာရီလုံး ဖှငျ့ပွီး သူစောငျ့နခေဲ့တယျ။
ကောငျလေးရဲ့ ဒီလိုစောငျ့မြှျောခွငျးက နှဈဝကျအထိကွာသှားခဲ့တယျ။
တဈနမှေ့ာ စာတိုကျကနေ ဗူးလေးတဈလုံး ရောကျလာခဲ့တယျ။
ဗူးထဲမှာ ခြောငျးငါးလေးတှရေဲ့ နမူနာရုပျကွှလေးတှပေါတယျ။
ငါးတခြို့က သဈရှကျလေးဘေးမှာ၊ တခြို့က မွကျတှကွေားထဲမှာ ပုံစံအမြိုးအမြိုးနဲ့ ရှိနခေဲ့တယျ။
ဗူးထဲမှာ စာတဈစောငျလညျးပါပွီး စာထဲမှာ ဒီလိုရေးထားပါတယျ။
“နငျ့ကိုတှဖေို့ ငါ့မှာ သတ်တိမရှိခဲ့ဘူး။
ငါပြော့ညံ့လှနျးလို့ဖွဈမယျ ဒါမှမဟုတျ နငျ့ကိုငါ လုံးဝမတှခေ့ငျြလို့လညျးဖွဈမယျ။
ငါ နကေောငျးတယျ။ နငျ့ကိုခှဲပွီး ဘယျလိုရှငျသနျရမယျဆိုတာကို ငါသိခဲ့တယျ။
ငါ့ကိုယျငါ ဂရုစိုကျကြှေးမှေးနိုငျခဲ့တယျ။ နငျ့အပွနျကို ငါနတေို့ငျး စောငျ့စရာမလိုတော့ဘူး။
ဟငျးတှေ ပူပူနှေးနှေးခကျြပွီး အေးစကျသှားတဲ့အထိ ငါစောငျ့စရာ မလိုခဲ့တော့ဘူး။
ဖုနျးလညျး ငါမသုံးတော့ဘူး။ နငျ့အတှကျနဲ့ (၂၄)နာရီလုံးဖုနျးကို ငါဖှငျ့ထားစရာလညျး မလိုတော့ဘူး။
ငါ့ကိုယျငါ ဘယျလိုကွငျနာရမယျဆိုတာကို ငါနားလညျသှားပွီ။
လှပတဲ့နရေ့ကျတှကေို ဘယျလိုတနျဖိုးထားရမယျဆိုတာကို ငါသိသှားပွီ။
နငျ့ကို ဘယျလိုခဈြရမယျဆိုတာကို ငါမလေို့ကျနိုငျခဲ့ပွီ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ငါ့အခဈြတှကေို အနာတရဖွဈအောငျ နငျဆော့ကစားခဲ့လို့ပါပဲ။
ကှာရှငျးစာခြုပျကို ငါးကနျအောကျမှာ ငါဖိထားခဲ့တယျ။ နငျလကျမှတျထိုးပွီးရငျဒီလိပျစာအတိုငျး ငါ့ကိုပို့ပေးခဲ့ပါ။
★ ဆောရီးပဲ…. ငါစိတျတှေ ပငျပနျးနှမျးနယျသှားခဲ့ပါပွီ” ★
လိပျစာအတိုငျး ကောငျမလေးကို ကောငျလေးသှားရှာခဲ့တယျ။
ရငျထဲမှာ မြှျောလငျ့ခကျြအပွညျ့နဲ့ ကောငျမလေးဆီက ခှငျ့လှတျခွငျးတှယေူပွီးကောငျမလေးမရှိရငျ သူ့ဘဝ မရှငျသနျရဲတဲ့အကွောငျးပွောဖို့ ကောငျလေးလိုကျသှားခဲ့တယျ။
ဒါပမေယျ့ အိမျတံခါးဖှငျ့ပေးတဲ့သူက ကောငျမလေးကိုယျတိုငျ မဟုတျခဲ့ဘူး။
ကောငျလေးဆီက စာရေးပွီးတဲ့နောကျ သူ့ကိုယျသူ အဆုံးစီရငျသှားပါတယျလို့ကောငျမလေးအဖကေ စိတျမကောငျးစှာပွောတယျ။
နောငျတတှကေ တပှတေ့ပိုကျနဲ့ သူ့တဈသကျစာတောငျ ထမျးပိုးလို့ မနိုငျခဲ့ပါဘူး။
★ တခြို့ “ဆောရီး” က အဲဒီလိုနညျးနဲ့ အဆုံးသတျခဲ့ကွတယျ။ ★
ဘဝတဈလြှောကျမှာ ကိုယျ့ကို တဈသကျတာတနျဖိုးထားမွတျနိုးသူတဈယောကျကိုတော့ လူတိုငျးကွုံကွရမှာပဲ။
အဲဒီလို ကိုယျ့ကိုတနျဖိုးထားသူကို မွတျနိုးတတျပါစေ။
“ဆောရီး”ဆိုတဲ့ တောငျးပနျမှုတိုငျးက“ကိစ်စမရှိပါဘူး”ဆိုတဲ့စကားနဲ့ လဲလှယျလို့မရနိုငျခဲ့ပါဘူး။
ကိုယျခဈြတဲ့သူကို မမွငျနိုငျတဲ့ အနာတရနဲ့ဒဏျရာတှေ မပေးမိပါစနေဲ့။
ဒါဟာ နှဈဦးနှဈဖကျလုံးကို ထိခိုကျနာကငျြစပေါတယျ။
“အခဈြ”ဆိုတာကို ခံစားစပွေီး “ဆောရီး”ကို အလှယျတကူ မပွောမိဖို့ သူတို့နားလညျတတျပါစေ….။
မန်တလေးစာကွညျ့တိုကျ ဇျောဇျော ၀၉၂၅၆၁၁၆၇၂၇- စာမကျြနှာမှ ကူးယူဖျောပွပါသညျ။